Tafahitsoka amin'ny kodiarana mihodina ny iPhone? Ity ny The Fix! - Iphone
telefaona tsy mamaly iphone 6
paoma iphone namboarina tsy mandeha
mety misy virus ve ny sms
hafatra amin'ny ipad tsy mandeha
Tafahitsoka amin'ny kodiarana mihodina ny iPhone? Ity ny The Fix!
Ny iPhone-nao miraikitra amin'ny efijery mainty misy kodiarana mihodina ary tsy azonao antoka ny antony. Tsy miverina ny iPhone-nao na inona na inona ataonao! Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho ny fomba fanamboarana ny olana rehefa raikitra amin'ny kodiarana mihodina ny iPhone-nao .
Fa maninona ny iPhone no mijanona amin'ny kodiarana mihodinkodina?
Matetika ny iPhone dia miraikitra amin'ny kodiarana mihodina satria nisy zavatra tsy nety nandritra ny fizotran'ilay famerenana. Mety hitranga izany aorian'ny fandrehanao ny iPhone, fanavaozana ny rindrambaiko, hamerenanao azy amin'ny Settings, na hamerenanao azy amin'ny fivadihan'ny orinasa.
Na dia tsy dia misy firy aza izany, ny singa ara-batana amin'ny iPhone dia mety ho simba na tapaka. Ny torolàlana tsikelikely eto ambany eto dia hanomboka amin'ireo dingana famahana olana momba ny lozisialy, avy eo manampy anao hahazo fanampiana raha toa ka manana olana amin'ny fitaovanao ny iPhone.
raha mainty ny efijery iphone-nao
Hard Reset ny iPhone
Ny reset mafy dia manery ny iPhone hamonoana haingana ary hiverina. Rehefa nianjera ny iPhone na nihena be na niraikitra tamin'ny kodiarana mihodina dia mety hamerina azy io ny famerenana mafy.
Ny fizotry ny famerenana famerenana mafy dia miovaova arakaraka ny modely iPhone anananao:
iPhone 6s, iPhone SE (Generation 1st), ary maodely taloha : Tsindrio miaraka ary tazomy ny bokotra Home sy ny bokotra herinaratra mandra-pahatonga mainty tanteraka ny écran ary hiseho ny sary famantarana Apple.
iPhone 7 : Tsindrio miaraka ary tazomy ny bokotra ambany ary ny bokotra herinaratra mandra-pahatonga mainty ny efijery ary hiseho ny sary famantarana Apple.
iPhone 8, iPhone SE (Generation faha-2), ary maodely vaovao : Tsindrio ary alefaso ny bokotra miakatra ambony, tsindrio ary alefaso ny bokotra ambany, avy eo tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny mandra-pahatonga mainty ny fampisehoana ary hiseho ny sary famantarana Apple
Ny famerenanana mafy dia hamaha ity olana ity matetika. Raha toa ka nanao izany dia avereno alefa avy hatrany ny iPhone ho iTunes (PC sy Mac mandeha Mojave 10.14 na taloha), izay nahita (Macs mihazakazaka Catalina 10.15 sy vaovao), na iCloud . Raha mitohy io olana io dia mila kopian'ny angona rehetra amin'ny iPhone ianao!
Avereno amin'ny laoniny ny iPhone
Na dia misy famerenana mafy aza dia afaka manamboatra vetivety ny olana rehefa miraikitra amin'ny kodiarana mihodinkodina ny iPhone dia tsy hofoanana ilay olan'ny rindrambaiko lalindalina kokoa izay niteraka ny olana tamin'ny voalohany. Manoro hevitra anao izahay ny hametraka ny iPhone ao anaty maody DFU raha mitohy ny olana.
Ny famerenana amin'ny laoniny DFU (fanavaozana ny rindrambaiko rindrambaiko) no famerenana amin'ny laoniny ny iPhone lalina indrindra ary ny dingana farany azonao raisina esory tanteraka ny olana momba ny rindrambaiko na ny firmware . Ny tsipika kaody rehetra dia voafafa ary ampidirina ao amin'ny iPhone, ary napetraka ny kinova farany an'ny iOS.
Hamarino tsara fa hamerina handrakitra ny iPhone alohan'ny hametrahana izany amin'ny maody DFU. Rehefa vonona ianao dia zahao ny anay Torolàlana famerenana amin'ny laoniny DFU hianatra hanao an'io dingana io!
Tonga ny fotoana hifandraisanao amin'ny fanohanan'ny Apple raha toa ka miraikitra amin'ny kodiarana mihodina ny iPhone-nao. Hamarino tsara fa manomana fotoana raha mikasa ny handray ny iPhone ao amin'ny Genius Bar ianao. Apple koa dia manana telefaonina SY chat mivantana tohano raha tsy mipetraka akaikin'ny toerana fivarotana ianao.
Raiso ho iPhone ny iPhone-nao
Namboarinao ny olana amin'ny iPhone-nao ary miverina miverina indray. Hamarino tsara fa hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy hampianarana ny fianakavianao, ny namanao ary ny mpanaraka anao ny zavatra tokony hatao rehefa miraikitra amin'ny kodiarana mihodinkodina ny iPhone.
Manana fanontaniana hafa momba ny iPhone-nao? Avelao izy ireo ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany!